Home News MW Hore Xasan Sheekh Maxamud oo Si diiran loogu soo Dhaweeyey Dalka...
MW Hore Xasan Sheekh Maxamud oo Si diiran loogu soo Dhaweeyey Dalka Ingiriiska.
Madaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa si diirran loogu sooo dhaweeye dalk Ingiriiska. Boqasho todobaad qaadatay oo u dalkaas ku tagay bulshada Somaliyeed ee UK iyo hay’ado dhowr ah oo daneeya arrimha Somaliya ayaa waxay la qaateen kulammo kala duwan, iyadoo dawladda Ingiriiska iyo dalal kalaba mas’uuliyiin ka tirsan ay is arkeen Madaxweynaha.
Mdaxaweynaha Xassan sheekh oo cilmi baaree hore ahaa waxaa uu dalka ka hayaa xog badan oo aad u soo jiidatay dhamaan madaxdii iyo aqoonyahannadii uu kula kulmay Oxford Union, Chatham Hosue iyo Jaamacada UCL. MW Xasan sheekh ayaa waxaa uu goobahan aqooneed ka jeediyey muxaaradarooyin aad loogu riyaaqay oo dhageeystaayaasha ay ka fi’iideen, sumacadda iyo karaamada dalkeennana kr u qaadday , iyadoo si aad ahna su’aalo uga weydiiyeen xaaladda dalka iyo dadka Somaliyeed ay hadda ku sugan yihiin.
Dhinaca kale, waxaa uu kulamo gonni goonni ah la qaatay aqoonyahanno iyo odayaasha dhaqanka iyo guuda ahaan bulshada UK waxaanaa uga warramay xaaladda uu dalku marayo iyo sida loo wajahi karo caqadaha hadda haystaa dowlad dhiska Soomaliya oo Carta ka soo bilowday. Xasan sheekh ayaa u sheegay aqoonyhannado Somalida iyo Ajnabigaba leh, odayaasha guurtiga UK, dhallinyarada jaamacadaha iyo dhamaan bulsho weynta reer UK inuu dalka uu ku soo waday qaabka talowadaagga loo yaqaanno, maadaama ay sida isaga ay la tahay aysan jirin cid laga maarmo iyo cid xoog ku qabsan kartaa dalka oo uu dhammaaday xelligii kali talisnimada.
Haddaba si arragtidaas looga mira dhaliyo madaxweynuhu waxaa uu sheegay in la asaasay xisbi cusub oo ku hawl gala talawaadaag iyo wax la wada leeyahay oo ay ummaddu wada dhisato si ay u wada ilaashadaan.
MW Xasan Sheekh ayaa waxaa uu sheegay inay dhawaan uga dhawaaqeen Magaalada Muqdisho xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka -UDP, kaasoo ay ku midoobeen xisbiyo jiray iyo kutladii horusocod, waxaanu reer UK uga baaqay inay hadda dhismaha xisbiga ka qeyb galaan si ay saameyn ugu yeeshaan habsocodka Xisbiga iyo go’aannadiisa siyaasadeed.
Guddoomiyaha Xisbiga UDP, ahna madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamud, ayaa kula dartdaarmay Somalida UK ku nool inay ka qeybqaataan dhismaha xisbigan si ay talada dalka uga qeyb galaan, noqdaanna hawlwadeenna xisbiga ee maanta iyo hogaamiyayaasha Mustaqblka. Madaxweynuhu waxaa aad ugu adkeeyey dadkii uu la hadayey inay marwaliba fahmaan in isku tashi, isku kalsoonaan iyo isusamir oo kaliya lagu gaari karo hadafka weyn ee dawlad dhiska Somaliya.
Previous articleKheyre Oo Maanta Kormeeray Wasaarada Maaliyada Iyo Dekeda Muqdisho
Next articleHey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Oo Si Aanan Sharci Aheeyn ku bixisay Basaaboorka Diplomatic
Federal appeals court confirms NSA’s snooping was illegal
DEG DEG: Golaha Wasiirada Puntland oo goordhow shir deg deg ah...